Mitsubishi Delica 2009 (#687888) ကို Amarapura ၿမိဳ့နယ္တြ... | CarsDB
Lot Number: #687888
Amarapura, Mandalay Division
*****Carsdb တ ွင်ကြော််ငြာထားသောကားဟု ဆက်သ ွယ်မေးမြန်းစုံစမ်း နိုင်ပါသည်။*****Good condition-
MISUBISHI DELICA (SOLIO).MDY Licence
S full grade
ရှေ့မီးကြီး HID. Slide motor 2
Digital aircon. push start. smart key
Tv beckcam. ခါးtv နှစ်လုံး
တာယာ အားကောင်း အောက်ပိုင်းအငြိမ်
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Myint Lwin မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Mitsubishi Delica 2009 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။